Amakamelo okulala amabili e-Notre Dame
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Emmanuelle
U-Emmanuelle unokuphawula okungu-163 kwezinye izindawo.
Isitezi sokuqala se-duplex encane enomnyango ozimele: amakamelo okulala amabili nendlu yokugezela encane. I-Clair, eyakhiwe egcekeni elincane, elithule kakhulu elinemigqa yesihlahla, elisendaweni eyitshe ukusuka e-Notre-Dame Cathedral, ilungele ukuhlala isikhashana enhliziyweni yeParis.
Isitezi sokuqala se-duplex encane enomnyango ozimele: amakamelo okulala amabili nendlu yokugezela encane. Kukhanya kakhulu, kugxunyekwe engadini encane yasegcekeni, endaweni eyitshe ukusuka e-Notre-Dame Cathedral, ilungele ukuhlala isikhashana enkabeni yeParis.
Abaningi kamasipala imigqa emikhulu ukudlula kwesokudla: umugqa 4 (-Nyakatho-Ningizimu umugqa), umugqa 1 (East-West line), umugqa 10. Rer B no-C zilungile kamakhelwane (A isezingeni Les Halles), futhi kukhona amabhasi amaningi asebenzayo aseduze: 38, 21, 24, 27, 86, 87, 47, 63 akuvumela ukuthi uzungeze idolobha ngokunethezeka nangokushesha. Kulabo abafika besuka e-Roissy Charles de Gaulle, i-RER iqonde e-Saint-Michel Notre-Dame.
Ukupaka okukhokhelwayo egalaji okungaphandle kwamagceke
I-rue des Trois Portes yavulwa ngekhulu le-12! Ukuthi uma sisendaweni endala yedolobha. Izisekelo zesakhiwo zisukela ekhulwini le-13, futhi isakhiwo ngokwaso kusukela nge-17-18. Zonke eendleleni eziseduze abagxile umlando, kukhona ngenqwaba yezinto ukuvakashelwa ngezinyawo endlini (Notre-Dame, le Sainte Chapelle, kule ndawo yokugibela imikhumbi the Seine, le Louvre (ungahamba lapho kumaminithi 10), izinkundla zikaLutèce, ingadi yaseLuxembourg, iJardin des Plantes, iNatural History Museum, iGreat Gallery of Evolution). Siphinde sihambe imizuzu eyi-10 ukusuka esifundeni semakethe sase-Les Halles, imizuzu eyi-10 uhamba ngezinyawo ukusuka eBeaubourg ... Ngamafuphi, indawo yephupho yalabo abafuna ukuthola idolobha!
I-Rue des Trois Portes yavulwa ngekhulu le-12! Lokho kusho ukuthi uma sisendaweni endala yedolobha. Izisekelo zesakhiwo zisukela ekhulwini le-13, futhi isakhiwo ngokwaso kusukela ekhulwini le-17-18. Yonke imigwaqo ezungezile igcwele umlando, futhi kunenqwaba yezinto ongazivakashela ngezinyawo uzungeze indlu (Notre-Dame, iSainte Chapelle, izikhumulo zeSeine, iLouvre (ungaya lapho ngezinyawo ngemizuzu eyi-10. ), inkabi kaLutèce, insimu yaseLuxembourg, Insimu Yezimila, IMnyuziyamu Yomlando Wemvelo, Igalari Enkulu Yokuziphendukela Kwemvelo). Kuphinde kube yimizuzu eyi-10 uhamba ngezinyawo ukusuka esifundeni sezentengiselwano saseLes Halles, imizuzu eyi-10 uhamba ngezinyawo usuka eBeaubourg ... Ngamafuphi, yindawo yamaphupho yalabo abafuna ukuthola idolobha!
Inombolo yepholisi: 7510500601645